जिल्ला झापा कारागारका महिलाहरु अत्यन्तै खुशी ,छमछमी नाच्दै यसरी हरितालिका तीज मनाउदै (हेर्नुहोस रोचक भिडियो सहित) – " कञ्चनजंगा News "
जिल्ला झापा कारागारका महिलाहरु अत्यन्तै खुशी ,छमछमी नाच्दै यसरी हरितालिका तीज मनाउदै (हेर्नुहोस रोचक भिडियो सहित)
No Comments on जिल्ला झापा कारागारका महिलाहरु अत्यन्तै खुशी ,छमछमी नाच्दै यसरी हरितालिका तीज मनाउदै (हेर्नुहोस रोचक भिडियो सहित)
नेपाली महिलाहरुको महान चाड हरीतालीका तिज हजुरहरुको कस्तो बिती रहेको छ ? हामी आप्नो चाड पर्व राम्रो बितोस भनेर सोची रहन्छौ तर के हामीले अरुका लागि कहिले सोचेका छौ त ? आज यो भिडीयो मा देख्नु भएको तिजको दृश्य हो जिल्ला झापा कारागारका महिलाहरुको, अत्यन्तै खुशी देखीन्छन्, छमछमी नाच्दैछन् ।.
कार्यक्रमको आयोजक कञ्चनजङ्गा ईन्चिटीयुट अफ हेल्थ एण्ड साईन्सेस लाई धन्यवाद छ । यहाँ भित्र भरखरका बच्चाहरु थिए केटीहरु थिए र वृद्ध आमाहरु थिए । तिजको दर खाई रहदाँ यती धेरै खुसी हुनुभयो कि आखा रसायो उहाँहरुको । आज दर मात्र होईन २५ हजार जरीवाना तिर्न नसकेर कैदी जिवन बिताई रहेकी एक आमालाई कञ्चनजङ्गा ईन्सिचुउटले रकम तिर्दै रीहा गरीदीएको छ ।
← एटीएमबाट पैसा चोरीकाण्डःयसरी थाहा पायो बैंकले एटीएमबाट पैसा चोरी गरेको → पहिलो चरणमा न्यूनमात्रै नर्स र केयर गिभर रोजगारीका लागि जापान लैजाने